ट्याब्लेट प्रयोग गरी जनगणना हुँदै - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, ८ कार्तिक सोमबार |
नेपाली युवाले भेटे फेसबुकको सुरक्षा कमजोरी
टिकटकमा यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस्, नत्र अकाउन्ट फ्रिज
कस्तो स्मार्टवाच किन्ने ?
आईफोन १३ किन्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ नेपाली
पैसा माग्न अश्लील भिडियो भाइरल गर्ने धम्की, तपाईँ
नेपाली युवाले बनाएको किबोर्ड एप एक करोडमा बिक्री
अब फेसबुककाे नाम परिवर्तन हुने, रिब्राण्डिङ गर्दै कम्पनी
कुन टेलिकम कम्पनीबाट फोन गर्दा कति लाग्छ शुल्क
टेलिकम नेटवर्कमा यी वेबसाइट चलाउँदा पैसा लाग्दैन
अब स्क्रिन बन्द हुदाँपनि युट्युबमा गीत सुन्न सकिने
२४ घण्टाभित्र आईपीटिभी बन्द नगरे सेवा अवरुद्ध पार्ने
पठाओमाथि रुट लम्ब्याएर बढी पैसा लिएको आरोप
ट्याब्लेट प्रयोग गरी जनगणना हुँदै
सोमबार, आश्विन ४, २०७८
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले काठमाडौंका ६ वटा स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट जनगणना गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र तारकेश्वर नगरपालिकामा प्रविधियुक्त ट्याब्लेटको प्रयोगबाट जनगणना गर्न लागिएको हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनगणनालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यस वर्ष प्रविधिको प्रयोग नमुनाका रूपमा काठमाडौँका ६ स्थानीय तहमा ट्याब्लेटको प्रयोग गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म भइरहेको घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने कार्यमा पनि ट्याब्लेटकै प्रयोग भइरहेको छ । आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म हुुने मूल गणनामा पनि उक्त स्थानीय तहमा ट्याब्लेटको प्रयोग हुनेछ ।
काठमाडौँमा भएका जनगणनाका पाँचवटा कार्यालयमध्ये ‘क’ नम्बरको कार्यालयअन्तर्गत पर्ने शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ र टोखामा भने अन्य स्थानमा जस्तै कागजकै फारम भरेर जनगणना कार्य हुँदैछ ।
विभागसँग सीमित मात्रामा ट्याब्लेट भएकाले अन्य सहरी क्षेत्रमा ट्याब्लेट प्रयोग गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
गत भदौ ३० गतेदेखि भइरहेको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यका लागि आठ हजार ५०० जना सुपरिवेक्षक खटिएको विभागले जनाएको छ । ती सुपरिवेक्षकले यस अवधिमा करिब ७० लाख घर तथा घरपरिवारको गणना गर्दैछन् ।
एक जना सुपरिवेक्षकले ८०० देखि एक हजार घर तथा घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ ।
देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जनगणनामा आउने सुपरिवेक्षक र गणकलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु सबैको दायित्व भएकाले सुपरिवेक्षकलाई आवश्यक सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
सरकारले यस वर्षको जनगणनाको नारा ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ भन्ने तय गरेको छ । -गोरखापत्र
ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी
काठमाडौं । कात्तिक दोस्रो सातादेखि स्मार्ट लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुला हुने भएको छ । करिब छ
दुई महिनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई महिनामा नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।
एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान हुने
ललितपुर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय
अनुमतिबिना सीसी क्यामेरा जडान
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा अनुमतिबिना सीसी क्यामेरा जडान गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
आईफोन १३ किन्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ नेपाली बजारमा मूल्य र अफर
कुन टेलिकम कम्पनीबाट फोन गर्दा कति लाग्छ शुल्क ?
पैसा माग्न अश्लील भिडियो भाइरल गर्ने धम्की, तपाईँ नफस्नुस् है !
कति जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोन रोज्ने ?
एक महिनामा नेपाल भित्रिए झण्डै ९ सय विद्युतीय गाडी
तीन महिनामै नेपाल भित्रिए २२ लाख फोन
इन्टेललाई किन फकाउँदै छन् युरोपेली देशहरु ?